Tababar Loo Furay Xirfadlayaal Caafimaad. - Cakaara News
Tababar Loo Furay Xirfadlayaal Caafimaad.
Jigjiga(Cakaaranews) khamiis, 18ka February, 2016, Xafiiska caafimaadka DDSI ayaa tababar u qabtay xirfadlayaal caafimaadka oo ka kala socday 5 cusbitaal iyo 16 xarun caafimaad oo ku yaala 6 Gobol oo ka mid ah gobolada deegaanka. waxaynta ujeedadada tababarkani tahay sidii kor loogu qaadilahaa xirfada aqoneed ee xirfadlayaashan caafimaadka iyo sidii fahan buuxa looga siin lahaa ka hortaga, baadhitaanka iyo daawaynta cudurka loo yaqaano Kalazar.
Waxaana furitaankii tababarkaasi ka hadlay wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI mudane Cabdifataax Siciid Maxamed Oo ka warbixiyay ahmiyada uu tababarkaasi leeyahay. wuxuuna sheegay in siyaasada caafimaadka ee DDSI iyo tan dalkuba ku salaysan tahay ka hortaga cudurada sidaasi darteedna xirfadlayaasha looga baahan yahay in ay kaalintooda ku aadan hirgalinta qorshayaashaasi ka soo baxaan islamarkaana ay bulshada siiyaan adeeg hufan oo tayaysan. Wuxuuna ku booriyay wasiirku xirfadlayaashan in ay mudada uu socto tababarkani fahan buuxa ka qaataan cashirada ay qaadanayaan.
Dhankiisa gadhwadeenka geedi socodka kor u qaadida caafimaadka, ka hortaa cudurada iyo fayo dhawrka ee xafiiska caafimaadka DDSI mudane Caydaruus Axmed ayaa tilmaan dheerka ka bixiyay istaraaatajiyadaha fidineed ee dhinaca adeegyada caafimaadka gaar ahaan jihooyinka looga hortaga cudurada faafa. Sidoo kalena waxa uu sheegay gadhwadeenku in ahmiyada tababarkani tahay sidii ay xirfadlayaashan ka yimid xarumaha caafimaadku iyo cusbitaaladu fahan buuxa uga yeelan lahdaayeen ka hortaga iyo daawaynta cudurka Kalazar.
Tababarkan ayaa socontoona mudo 4 maalmood ah waxaana cashiro ka bixinaya khabiiro ka socday xafiiska caafimaadka DDSI.